‘मन पशुपतीमा जलिरहेका लासले हैन, छेउमै काल पर्खिरहेका वृद्धाआश्रमको भिडले भकानिन्छ’ | Makalukhabar.com
‘मन पशुपतीमा जलिरहेका लासले हैन, छेउमै काल पर्खिरहेका वृद्धाआश्रमको भिडले भकानिन्छ’
पशुपति गइरहन्थे म । कामको ब्यस्तताले धेरै भयो जान पाएकी थिइन। बल्ल आइतबार समय मिल्यो, र गएँ ।
बृद्धाश्रम छ पशुपति परिसरभित्र । सधैं भरिभराउ हुन्छ बृद्धाश्रम । त्यहाँबाट फर्कदा पटक्कैपिच्छे कामना गर्छु म- “हे पशुपतिनाथ ! खाली होस् यस बृद्धाश्रम । म फेरि आउन नपरोस् यहाँ ।” तर मेरो कामना विपरीत बृद्धाश्रम अझ भरिभराउ हुन्छ । अघिल्लोचोटी जाँदा भेटिएका केही अनुहारहरू पछिल्लोचोटि जाँदा भेटिदैंनन् । त्यहाँ नयाँ अनुहार आइसकेका हुन्छन् ।
अपवाद बाहेक अधिकांशको गुनासो आफ्नै सन्तानप्रति हुन्छ । पीडैपीडाको पहाडले थिचिएर दुःखैदुःखमा दिन बिताइरहेका यी बृद्ध-बृद्धाको उदास अनुहार बेस्सरी बिझाउँछ सधैं मलाई । जति बिझाए पनि आखिर के गर्न सक्छु र म ? उनीहरूको सन्तानको अभाव पुर्ति गर्न सक्छु र ? अहँ पक्कै सक्दिनँ ।
म सँगको सधैंको भेटमा तिनै बाबा मुटु भक्कानो पारेर धुमिल आँखा क्षितिजतिर ओछ्याउँदै भन्नुहुन्थ्यो- “ऊ (छोरा) एकदिन त आउँछ होला हगि मलाई लिन ?” उफ् ! तर आएन उनको निष्ठुरी छोरा उनलाई लिन । बरू बिदा हुनुभयो बाबा आफैँ सबैलाई छाडेर ।
कसरी भयो होला यस्तो हालत ? बाबाको नियति थाहा पाउन चाहन्थें म । धेरैपटकको मेरो आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नसकेपछि एकदिन उहाँले आफ्नो नालिबेली यसरी बताउनु भएको थियो ।
पहाड घरमा सानीआमाको कारण १० बर्षमै आफू शहर पस्न परेको कुरा र धेरै दुख गर्दै जिवन विताएको बिगत सम्झदै बाबा आफ्नो २७ बर्षे जवानीमा फर्कनु भयो । सूर्य झैं झरझराउँदो भो उहाँको अनुहार ।
अबरूद्ध गला सफा गर्दै बाँकी ब्यथा यसरी सुनाउनु भयो : “हेर नानी ! खाइ नखाई छोरोको इच्छानुसार पढाइयो । छोरोभन्दा धेरै खुशी थिएँ म, ऊ डाक्टर भएकोमा । छोरोको बानिब्यहोरामा देखेर डाहा नगर्ने कोही थिएन । छोरो हुनु त फलानाको जस्तो पो त ! गर्वले छाती चौडा हुन्थ्यो छोराको प्रशंसा सुनेर ।”
फेरी कथा जोड्नु भयो- उस्को इच्छा अनुसारकै बुहारी भित्रायो खुशी थिएँ म पनि ।
- “बिहे भएको ६ महिना नबित्दै बुहारीको कचकच सुरू भो । छोरोलाई मोहनी लाइस् पो भन्छ ए मलाई त । साँच्चै आज्ञाकारी थियो त्यो । भनेको कुरा एउटै नकाट्ने । तर विहे भएको महिनौ दिनमै स्वास्नीसँगै मिलेर मलाई गाली गर्न सुरू गर्यो । अमृत जस्तै उस्को वचन तीर बनेर मुटुमा गढ्न सुरू भइसकेको थियो । सहनुको पनि सीमा हुन्छ नि ! कहिलेकहिँ त मलाई मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । के गर्नु आफुले सोच्दैमा काल नआउॅदोरहेछ ।’
त्यस्लाई कति दुःख गरेर खाई नखाई एक्लै हुर्काएँ । पढाएर सक्षम वनाए । । बिहे गरेको एक बर्ष नबित्दै स्वास्निको कुरा सुन्न थालेर मलाई नोकर झैं गर्न थाल्यो । अपमान त कति सहेँ सहेँ नानी, भनेर के साध्ये । एकदिन त बुहारीले हातै हाली ममाथि । छोरा आएर झगडा मिलाउला भन्ने सोच्या त, मध्यरातमा घरबाट घोक्राएर निकाले । बाबा बृद्धाश्रम थर्काएर रूनु भो । मभित्र ९ रेक्टरको भूकम्प गयो । मुटु नै चिरिने गरि म पनि रोएँ ।
जवान युवाहरू देख्दा आफ्नै छोराको याद आउँथ्यो । मन थाम्नै नसक्ने गरी बाउँडिन्थ्यो ।आफ्नै छोराबाट लत्याइएको म, अरू कसले पो कठै भन्थ्यौ र ? मेरो सहारा को थियो र ? यही आँखाको आँसु न हो । अचम्म नानी ! रोएर मान्छेको आँसु कहिल्यै नसकिदो रहेछ । यी हेर न, अहिले पनि यो आँसु बगेको ।” सरक्क आँसु पुछ्नु बाबाले ।
सम्हालिँदै भन्नुभयो बाबाले :
त्यसपछि म सडकको भएँ । बुहारीले नहेरे पनि छोराले त हेर्लान् नि ! जे भए नि छोरा त आफ्नै हो भनेर मनभरी आश बोकेर घरको गेट अगाडि फेरी उभिएँ । तैपनि मेरो लागि गेट खुलेन त्यसबेलादेखि यहीँ छु ।
बाले आफ्नो कथा-ब्यथा सक्नुभो । स्तब्ध बनें म । चौरास्ताको शालिक जस्तै ।
बाको कुरा सुनेपछि एकतमासले अमिलो भयो मेरो मन । फिल्मी कथा जस्तै लाग्यो जीवन । सन्तानहरूमा बढ्दै गएको कठोरता र मूल्यहिनताले मुटु चिमोटिरह्यो । जन्म दिएर आज यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउने बाबाप्रति यति निर्मम हुन सक्ने सन्तानहरूबाट समाजमा कसरी मानवीय मूल्य स्थापित होला ? कतै यो समाज पाषाण युगतिरै त फर्कँदै छैन ? भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कृति छाडेर जाँदैछौं ? प्रश्नै प्रश्नको चक्रब्यूहमा रूमल्लिएँ म ।
जब मान्छेमा नैतिकता र मानवीयता बाँकी रहन्न तब मान्छे, मान्छे नभएर पशु बन्दछ । आमा बाबा विर्सिने हो भने हामी सबै माकुरा हुनुपर्छ । माकुराले दु:खले जाल बुन्छ, बच्चा जन्माउँछ तर विधिको खेल बच्चाले आफ्नै आमा बाबालाई खाइदिन्छ । आज प्रत्येक नेपालीहरुको भिसेरा जाँच गर्ने हो भने बाबा आमा खाने माकुरो तन्तु फेला नपर्ला भन्न सकिन्न ।
आमा-बाबु भनेका जिउँदो भगवान हुन् भने पुरानो पुस्ता भनेको जिउँदो इतिहास । घरको भगवानलाई सधैं रूवाएर मन्दिरमा राखिएको पत्थरको भगवान पुज्नुको के अर्थ ? जिउँदो इतिहासको मानमर्दन गरेर इतिहासको पोथा कण्ठ पार्नुको के अर्थ ?
म सँग छुट्टिनु अघि बाबाले भन्नुभएको थियो - “नानी !
छोरी भनेपछि सकेसम्म पेटमै मार्ने, जन्मिहाले पनि पशुलाई झैं ब्यबहार गर्ने यो समाजमा परेको बेला काम लाग्ने चाहिँ छोरी नै हुन्छे है । भोलि पेटमा छोरी आईभने नमार है नानी । छोरी भएकी भए आज मेरो यस्तो हालत हुन्थ्यो त ? पक्कै हुँदैनथ्यो ।
वाको कुरामा सत्यता घोलिएको महशुस भएको थियो मलाई ।
छोरीको भ्रुणहत्या गर्ने हत्याराहरूप्रति घृणा जागेर आयो । साँच्चै, छोरी हुनुमा गर्व छ मलाई । छोरी भनेको श्रृष्टी हो । सिर्जना हो । ऊ सहनशील हुन्छे, सहयोगी हुन्छे । सबभन्दा बढी त छोरीसँग मानवता हुन्छ ।
बृद्धाश्रममा कष्टकर जीवन बिताइरहेका, सडकको पेटीमा आँसु पिउँदै अपमानित जीवन बाँचिरहेका वा घरमा सन्तानहरूका बीचमा पनि एक्लो जीवन जिइरहेका ती बृद्ध-बृद्धा आमा-बाबाहरू सम्झेर मभित्र साँच्चै मानवता उर्लेर आउँछ। आफू बाँचेको यस समाजसँग बिद्रोह गर्न मन लाग्छ । खासमा सम्पत्तिमोह र संस्कारहीनता यसको मुख्य कारण हो । अब छोरा-छोरीलाई सम्पत्ति (अंश) होइन, राम्रो शिक्षा र असल संस्कार दिनु पर्छ ।
पितृ देवो भव ! अर्थात् पिता देवता हुन्